HD in० para० प्याराडीसियल पृष्ठभूमि प्याक गर्नुहोस् क्रिएटिव अनलाइन
अतिवादीवादी सौंदर्यशास्त्रमा, अवधारणात्मक भार धेरै शक्तिशाली छ र यसको लागि अनिवार्य रूपमा श्रोताको प्रयोग आवश्यक छ जुन आदर्शवादको उदहारण गर्दछ। चाहिएको पूर्णता मा सीमा वातावरण कारणको सीमा बाहिर दृश्यहरु विकास गर्न। यस कारणले गर्दा, प्रकृतिले हामीलाई धेरै खेल दिन सक्दछ, किनकि यसले हामीलाई धेरै बनावट र तत्त्वहरू प्रदान गर्दछ जुन हामी धेरै खेल्न सक्छौं। थप रूपमा, प्राकृतिक र शहरी परिदृश्यहरूले कुनै पनि स्तरमा हामीलाई धेरै स्वतन्त्रता दिन सक्छ। ती दुबै पोस्टरहरू र उडानकर्ताहरू वा वेब पृष्ठहरूमा कामका लागि उपयोगी हुनेछन्। ती सबै प्रकारका कम्पोजिसनहरूमा लालित्य र गुणवत्ता ल्याउँदछन्। यसकारण म एउटा ढु with्गाले दुइवटा चराहरूलाई मार्नेछु। यस हप्ताको अन्तमा हामी अतियथार्थवादी सौंदर्य देख्नको लागि आफूलाई समर्पित गर्दैछौं भन्ने तथ्यको फाइदा उठाउँदै, म तपाईंलाई पृष्ठभूमिहरूको यो प्याक प्रस्तुत गर्दछु, जुन यो सौंदर्य वा अन्य प्रकारका अवधारणाहरूमा काम गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। प्याकमा पचास भन्दा बढी पृष्ठभूमिहरू छन् उत्कृष्ट महान सुन्दरता दृश्यहरूको उच्च रिजोलुसनमा। समुद्र तट, ताल, शहरहरू, समुद्रहरू, आकाश, मीडोजहरू ... मैले ल्याण्डस्केप र प्रकारहरूको सबैभन्दा ठूलो विविधता स gather्कलन गर्न कोशिश गरेको छु। तपाईं यो लिंकमा तिनीहरूलाई ट्याब्लेटहरू फेला पार्न सक्नुहुन्छ उच्च परिभाषामा नि: शुल्क पृष्ठभूमि ( https://drive.google.com/file/d/0B7auI2v6-vbtX2dJQ0VlRC1NUk0/edit?usp=sharing ),
तिनीहरू दुबै व्यावसायिक र व्यक्तिगत प्रयोगको लागि स्वतन्त्र छन् त्यसैले तिनीहरू सबै प्रकारका कामका लागि धेरै उपयोगी हुन सक्दछन्। म आशा गर्दछु कि तपाईं उनीहरूमा धेरै goo पाउनुहुनेछ र उनीहरूले तपाईंको अपेक्षा पूरा गर्छन्। यदि तपाईंसँग कुनै प्रकारको शंका, समस्या वा योगदान छ भने, तपाईंलाई थाहा छ ... टिप्पणी!
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » पुनरावृत्त » छविहरू » प्याक + +० प्याराडीसियल पृष्ठभूमि HD मा
के तपाइँसँग प्रयोगकर्ता इजाजत पत्र छ?
Vlycser लाई जवाफ दिनुहोस्
जोसेफिना एस्कालोना भन्यो
यी साँच्चिकै सुन्दर चमत्कारको साझेदारीको लागि धन्यबाद।
जोसेफिना एस्कालोनालाई जवाफ दिनुहोस्
बेलिंडा मोटा भन्यो
मलाई तस्बिरहरू मनपर्‍यो। धन्यवाद धेरै सुन्दर
बेलिंडा मोटालाई जवाफ दिनुहोस्
येशू कोटा भन्यो
राम्रो योगदान तपाईंलाई धेरै धेरै धन्यवाद
JESUS ​​COTA लाई जवाफ दिनुहोस्